ဆောင်းဦးပုံပြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဆောင်းဦးပုံပြင်
Posted by မောင် ပေ on Dec 18, 2011 in Creative Writing, Short Story | 13 comments
သြော်…တစ်ရက်..တစ်ရက် ၊ သမုဒ္ဒရာဝမ်းတစ်ထွာ အတွက် စိတ်ရောကိုယ်ပါ နှစ်မြုပ်နေခဲ့တာနဲ့ အတိတ်တွေ ကို မေ့ထားခဲ့တာ ကြာနေပေါ့ လို့ ၊ သက်ပြင်းချမိတယ် ။
နားထောင်ကြည့်မိတော့ ၊ ကိုယ် အရမ်း ကြိုက်တဲ့ “ထူးအိမ်သင်” ရဲ့“ မြို့ ပြညများ ” ဆိုတဲ့ သီချင်း ဖြစ်နေတယ် ။ သောက်ဖို့ မှာထားတဲ့ ကော်ဖီ ပလိန်းတောင် ဖောက်မဖျော်ဖြစ်အောင်ဘဲ …တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်သွားမိတယ် ။
ငါ့ ဝိညာဉ် ရယ်… ”
“ သွေးကြောများ ရပ်တန့် သွားပြီလား ၊ ငါ့ ရင်မှာ တုန်လှုပ်သွား…
အေးစက်တဲ့ မင်းရဲ့ လက်တွေက ငါ့ ကိုယ်မှာ ဆော့ကစား…အား မင်းထွက်သွား..
အခန်းထောင့် အမှောင်ထဲက စကားပြောသံများလား… အား ထိတ်လန့် နေဆဲ…
“ အင်း…မင်း ဒီကိစ္စအတွက် စိတ်ညစ်ပြီး အရက်တွေ အများကြီး သောက်မနေနဲ့ ဦးနော် ”
“ ဟဲ့…ဘာတုန်း ၊ မျက်နှာကြီးက အီးမှန်တဲ့ ရုပ်နဲ့ ၊ ဘာလဲ သောက်ချင်လို့ လား ဟဲဟဲ ”
“ နင့် အတွက် သတင်းကောင်းပါဟဲ့ ၊ ဟိုဟာလေ…နင် ဖြူ့ ကို ဘယ်လို သဘောထားလဲ ၊ အဲဒါ ပြောပြစမ်းပါ ”
“ ဟင်…နင် ပြောစရာ ရှိတယ် ဆိုတာ ဒါဘဲလား ၊ ဒါဆို ငါ အရက်ဘဲ သွားသောက်တော့မယ် ဟာ ၊ ငါ့မှာ အဲ့ကိစ္စအတွက် ပြောစရာ စကားမရှိဘူး ”
“ ဒီလိုကွ… ”
ပုဂံမှ ပြန်လာအပြီး ၊ လူစု ခွဲကြတော့ ၊ ဖြူ့ အနား ကို ကပ်ပြီး “ ညနေကြ ၊ ငါ နင့်အဆောင် လာခဲ့မယ်နော် ” ဟု ပြောလိုက်တော့ ၊ သူမ လှပစွာ ပြုံးလိုက်ပြီး ၊ ခေါင်းညိတ် ပြခဲ့သည် ။ သူမ အပြုံးကို မြင်လိုက်ရသော ကျွန်တော် သည် အသက်ရှူရန် ခဏမေ့သွားမိသည် ။ လှလွန်းလိုက်လေခြင်း ။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော့် စိတ်ထဲတွင် ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ၊ တစ်ခုခု ကို ကြောက်မိလာသလိုလို နှင့် ၊ ကြက်သီး ထသလိုလို…
ဇါတ်သိမ်းပိုင်း ကို ဆက်လက်ရေးတင်ပါမည် ။
အခြေအနေကနေ အခုပြန်ဖြစ်လာတာကိုး ….
ဖြူပြောလိုက်သောစကားကြောင့် ကျနော့်မှာ နှလုံးသွေးများရပ်တန့်
မောင်ပေ ဖြူ ကို ရှင်ယူမှဖြစ်မယ်။
ဖြူ့မှာ..ဖြူ့မှာ…ဖြူးမှာ ကရင်သူပုန်တွေ ဝင်နေပြီ။ အဲဒါ မြို့မီးလောင် တောကြောင် လက်ခမောင်းခတ်မိုလို့ ကိုကြောင်စိုးလွင် ဖြူးမြို့သွားပြီး ပစ္စည်းလုပေးပါ။။။
မဒမ်ပေကို လက်တို့ ထားချေမှပဲ
နှလုံးသား မြို့ဟောင်း တူးဖေါ်ချက်တွေ ပါလား
မဒမ်ပေသာ သိသွားရင် ဒန်တန့်တန်…။
ဟင်..ခင်ဗျားဘဲ ခင်ဗျား ကျောင်းသားဘဝ ခံစားချက်တွေကို
ကိုယ်တိုင်မရေးရဲလို့ ၊ ကျုပ် ကို ဇွတ် အတင်းရေးခိုင်းပြီး
အခုမှ….ပေတူးတူး လာမလုပ်နဲ့ နော်
ဂေဇက်ကို နေ့ စဉ် ဝင်ဖတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မဒမ်ဘလက်ရေ
ကျုပ် က အက်စ်ဘလက် ရဲ့ ဟိုအရင်က ခံစားချက်တွေ ကို အငှားဝင်ဖွဲ့ ထားတာပါခင်ဗျ
ပုဂံမှာ သွားကဲခဲ့တဲ့ နယူးရီးယားပုံပြင်တွေထဲကတစ်ပုဒ်ပေါ့လေ
ဘော်ဒါတွေ အဖွဲ့လိုက် …အဲ့သည့် ပုဂံ ကိုပဲသွားရင်း …..
အဲ့သည့်လို မီးပုံပွဲ လုပ်ရင်း ….အဲ့သည့်မှာ ….
စကော့တလန် စမ်းရေစိမ် အတွေးတွေက ရီဝေစွာနဲ့ ကခုန်ခဲ့တာပေါ့ ….
ကျနော့်လက်ထဲက ဂစ်တာ အိုလေးတလုံးက ချစ်တေးတွေသီလို့ ….
မှတ်မှတ်ရရ ကျနော် ဆိုဖြစ်တာ အရင်က မန္တလေးက အဆိုတော် ကိုစု
(မှားရင်ပြင်ပါ)ဆိုပြီး တလောလေးက ဇော်ပိုင် ပြန်ဆိုထားတဲ့ ….
အိပ်မက်နတ်သမီး တဲ့ …ဟုတ်တယ် အဲ့သည့်ညက ကျနော့် အိပ်မက်နတ်သမီးလေးကို
ရှာတွေ့ခဲ့သပေါ့ဗျာ …. မှန်ရာပြောရရင် သူခေါ်ရာနောက်ကို အ၀တ်တထည် ကိုယ်တခု နဲ့
လိုက်ခဲ့ဖူးသူပါ ….. ယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်း လမ်းမမှာ ကျနော်ဟာ ခြေဗလာနဲ့ပေါ့ …..
တော်ပါဘီဗျာ …ရင်ထဲမကောင်းလို့ ..မရေးတော့ပါဘူး ….
အဲ့ညက နာမူးနေတုန်း …နာ့ စကောလ် ကို ခိုးတာ ဘယ်ကောင်တုန်းကွ. ….
ခွီးတဲ့မှဘဲ …ခိုးရင်လည်း ..ညှပ်ဖိနပ်အစုတ်လေးတော့ ..ထားခဲ့မှပေါ့…
အားပေးပါသည် ကေပိုရယ် ….
ခြေတုံးလုံး နဲ့ညက အမူးပြေပုံမရဘဲ အဝတ်အစားဘိုသီဘတ်သီ နဲ့ 
အရက်ပုလင်း ဖင်ကြားညှပ်ပြီး လျှောက်သွားနေတဲ့ ငတိတစ်ယောက် ဟာ
အင်းကပေ …ကပေ…။ အီးရက်တွေ သောက်ပီး ဆောင်းည ချောက် အိပ်မက်တွေ မက်လာပြန်ပီ ထင်ရဲ့…။
ရွာထဲက လူတွေဖတ်ရအောင် နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ရေးပြပါဦး ကိုမေပေါင်